ICanLocalize - ပရိသတ်အသစ်များကိုရောက်ရှိရန်သင်၏စီးပွားရေးဆိုက်ကိုစျေးသက်သာစွာဘာသာပြန်ဆိုပါ Martech Zone
ICanLocalize - ပရိသတ်အသစ်များကိုရောက်ရှိရန်သင်၏စီးပွားရေးဆိုက်ကိုစျေးသက်သာစွာဘာသာပြန်ဆိုပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2020 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2020 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏အေဂျင်စီသည်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုအားသူတို့၏ site ကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ၎င်းကိုရှာဖွေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များထံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများတိုးတက်စေရန်ကူညီရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ WordPress site တစ်ခုရှိနေချိန်မှာတည်ဆောက်သူတွေကမှီခိုနေရတယ် စက်ဘာသာပြန်ချက် စပိန်စကားပြောသောသူ visitors ည့်သည်များအဘို့။ ဆိုက်၏စက်ဘာသာပြန်ခြင်းတွင်စိန်ခေါ်မှုသုံးခုရှိသည်။
စကားပြော - စပိန်စက်ဘာသာပြန်ခြင်းသည်မက္ကဆီကန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိခဲ့ပါ စကား ၎င်း၏ visitors ည့်သည်များ၏။
ဝေါဟာရကထာ - စက်ဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည်တိကျသောဆေးကုသမှုများနှင့်မကိုက်ညီပါ ဝေါဟာရကထာ.
ထုံးစံ - ဘာသာပြန်များသည်ကောင်းသော်လည်း၊ စကားပြောဆိုမှုသဘောသဘာဝမဟုတ်ပါ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်စကားပြောဆိုရာတွင်လိုအပ်သည်။
သုံးယောက်စလုံးကိုနေရာချနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာစက်ဘာသာပြန်ခြင်းထက်ကျော်လွန်ပြီး site အတွက်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကိုငှားရတယ်။
WordPress WPML ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ
နှင့် WPML ၏ဘာသာစကားမျိုးစုံ plugin နှင့်အလွန်ကောင်းသော WordPress အခင်းအကျင်း (အဓိက) ၎င်းကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် site ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပြီးထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် WPML ၏ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝဘာသာပြန်နိုင်စေရန် ICanLocalize ရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ။
ICanLocalize လုပ်ပါ မြန်ဆန်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တတ်နိုင်သောဘက်ပေါင်းစုံသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ၄ င်းတို့သည်ဘာသာစကား ၄၅ ခုကျော်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအသိအမှတ်ပြုခံထားရသောမိခင်ဘာသာပြန်များကို ၂၀၀၀ ကျော်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းတို့၏နှုန်းထားများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများကိုသာလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်လက်စွဲစာအုပ်တပ်ဆင်မှုမျိုးကိုမဆိုလိုအပ်သောရိုးရာအေဂျင်စီများထက်များစွာနိမ့်ကျသည်။
ICanLocalize နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော WPML Translation Dashboard ကို အသုံးပြု၍ ဘာသာပြန်အတွက်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်၍ ဘာသာပြန်ခြင်းတောင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ စကားလုံးအရေအတွက်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ ICanLocalize အကောင့်ရှိသင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်ပြီးတွက်ချက်သည်။ ဘာသာပြန်များသည်တန်းစီပြီးအလိုအလျောက်သင့်ဆိုဒ်တွင်ထုတ်ဝေသည်။
WordPress ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအပြင် ICanLocalize သည်ရုံးစာရွက်စာတမ်းများ၊ PDF ဖိုင်များ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်များနှင့်စာတိုတိုများကိုလည်းဘာသာပြန်နိုင်သည်။
ထုတ်ဖော်: ငါငါ့အ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် ICanLocalize လုပ်ပါ.
Tags: တတ်နိုင်တဲ့ဘာသာပြန်ချက်အချစ်ရေးဘက်ပေါင်းစုံဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများwordpress multi- ဘာသာစကားwordpress plugin ကိုwordpress ဘာသာပြန်ချက်wordpress ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုwpml
ရိုက်ကူးထားသောနေရာများ - အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များနှင့်ရုပ်ပုံများ